Shirkii Golaha Amaanka Oo Furmay - Cakaara News
Shirkii Golaha Amaanka Oo Furmay
Diridhaba( Cakaaranews ) Talaado, 8da march 2016, madaxwaynaha DDSI mudane Cabdi Maxamuud Cumar ayaa saaka hoolka shirarka ee Samrat huteel kafuray shirkii golaha amaanka ee deegaanka oo kadhacay magaalada diridhaba.
Shirkan ayaa waxaa kasoo qaybgalay mas’uuliyiinta hay’adaha amaanka oo ay kamid yihiin janaralka ciidanka difaaca qaranka qaybta koonfur bari mudane janaraal Abraham woldemariam, janaraalka guud ee ciidanka gaarka ah ee DDSI mudane Cabdiraxmaan Cabdulaahi Buraale, gudoomiyeyaasha gobolada, hogaamada nabadgelyada iyo taliska kifladoorada.
Hadaba madaxwaynaha DDSI mudane Cabdi Maxamuud Cumar oo furay shirkan ayaa sheegay in ugu horayn ay muhiim tahay in laga warbixiyo halka ay marayaan qorshayaashii nabadgelyo ee fadhigii hore lagu kala qaatay iyo xaalada guud ee nabadgelyada deegaanku halka ay marayso gaar ahaan dhanka sii xoojinta nabadgelyada xuduudaha dalkeena.
Kadibna, waxaa halkaa la iskula qaatay in 100% ay xaalada nabadgelyada dalka iyo ta deegaankuba ay taam yihiin iyadoo aysan meesha kabaxsanayn in halka ay maanta taagan tahay laga sii sare mariyo oo had iyo jeer adkaynta nabadgelyadu noqoto mid loo taagan yahay.
Ugudanbayna, shirkan golaha amaanka oo ah shir xiliile ah oo lagu qiimeeyo xaalada nabadgelyada deegaanka iyo ta dalkaba ayaa lafilayaa in uu niska danbe ee maanta uu kusoo gabagaboobo guulo wax ku ool ah oo lataaban karo.